Sebenzisa olu luhlu lokuhlola ukuphonononga uphinde uhlele ukubhala kwakho ngesiJamani. Olu luhlu lokutshekisha luye lugxininisa ukubhala okubhaliweyo / igrama zendlela oza kuzifumana kuloluhlu lokubhala uluhlu olubanzi lokubhala, njengokuqala isivakalisi ngencwadi enkulu, engenzi umhlathi. njl njl
Kujoliswe ngokukodwa kulezo zibalo zokubhala / negrama ezifunekayo ukulungisa ukubhala kwesiJamani.
Ngaba ubeke zonke izibizo?
Khumbula zonke izibizo kunye naziphi na izichazi ezikhethiweyo ( im Voraus ), izenzi ( das Laufen ) njl njl. Kaninzi "
Ngaba uye wasebenzisa amatyala egrama?
Ngokuxhomekeke kwintsimi yesigwebo, onke amanqaku, izibizo, izimelabizo, kunye nezichazi zingaba yeyiphi na i-casinative, i-genitive, i-dative okanye ityala lokumangalela. Kaninzi "
Ngaba ubeke izenzi zakho kwindawo yesibini kwizivakalisi zakho ezivakalisileyo?
Oku kuthetha ukuba isenzi sihlala sisona sibini sigaba segrama kumvakalisi ovakalisileyo. Khumbula, oku akuthethi ukuba isenzi lizwi lesibini.
Ngokomzekelo: I- Der kleine Junge iya ku-hause Gehen (Inkwenkwana ifuna ukuya ekhaya). Ngaba liya kuba lizwi lesine. Kwakhona, isenzi isisona sesibini, nokuba okokuqala into yesigwebo esichazayo ayiyiyo into. Kaninzi "
Ngaba ubeke inxalenye yesibini yegama elidlulileyo?
Inxalenye yesibini yesigama somlomo mhlawumbi ithatha inxaxheba, inqabileyo okanye ingapheliyo, njengeSie trocknet ihre Haare ab ( Ubomisa iinwele zakhe). Gcina ingqondweni kunye nezenzi zigqitywa kumacandelwana angaphantsi kunye neziqhelo.
Ngaba zikhona naziphi na izibhengezo ezinokubambisana?
Umzekelo = dem => am .
Ngaba ufake ii-commas phambi kwamagatya akho axhomekeke kuyo? Inani kunye namanani?
Khumbula ukuba ulwimi lwesiJamani lusebenza kwimigaqo eqinile ekusebenziseni ii-commas. Kaninzi "
Ngaba uye wasebenzisa amanqaku okucaphuna eJamani?
Ininzi ezimbini iintlobo zisetyenzisiweyo. Ukusetyenziswa ngokuqhelekileyo ngamanqaku angaphantsi kunye amanqaku aphezulu => " Kwiincwadi zanamhlanje, uya kubona kwakhona amanqaku okucaphulwa kwesitayela se-chevron => » «
Ngaba uye wasebenzisa iifom ezisemthethweni zeSie njengoko ziyimfuneko?
Oko kuya kubandakanya mna kunye ne- Ihr . Kaninzi "
Musa ukulibala igama elifanelekileyo kwiimvakalisi zesiJamani: ixesha, indlela, indawo.
Umzekelo: I- Sie ist schnell nach Hause gefahren . (ixesha, i- way-schnell , indawo- nach Hause ).
Khangela "abahlobo bobuxoki" okanye ukuxoxwa kwamanga.
Lawa ngamazwi - okanye abhalwe ngokufanayo okanye afanayo - ekhoyo kwiilwimi zombini, kodwa zineentsingiselo ezahlukeneyo. Umzekelo ibhald / ngokukhawuleza, u- Rat / isiluleko. Kaninzi "
Ixesha lexesha elizayo Ukuphonononga ii-Quiz ze-ESL
Inxaxheba eDlulileyo: yiLwimi, liLungelelaniso
Ukusebenzisa iLwimi yeSpeyin 'uLlamar'
'Ninguno' Ngokuqhelekileyo isetyenziswe kwiFomu eliBodwa
Iimbonakalo zoLwazi kunye neeVenzi ezingenokwenzeka kwiJapan
Iziphakamiso zesiLatini ezithatha i-Case Ablative
I-American Standard English (i-Accent ne-Dialect)
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala Zase-Illinois